धेरै मानिसहरू आफ्नो मोन्टेनेग्रो छोड्न चयन गर्नुहोस्। यो एक सानो राज्य संग एउटा ठूलो को आकर्षण, स्थित मा Adriatic तट।
त्यहाँ रिसोर्टमा सहर को एक ठूलो संख्या तपाईंले आफ्नो बसाइ अवधिको लागि रहन सक्छ जहाँ होटल हो र, क्रमशः। होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट -5तारा जटिल, उत्कृष्ट रूपमा मानिन्छ जो। र असल कारण, यो एक धेरै को कारण।
मानिसहरू जहाँ होटल जटिल ध्यान, आफ्नो रहन समयमा बस्नेछन् जो होटल पहिलो कुरा निर्णय। यो एक सुविधाजनक स्थान मा स्थित छ कि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट5* Becici भनिन्छ रिसोर्ट शहर मा स्थित छ। यसलाई सही Adriatic सागर को तट मा स्थित छ। बस 20 मिटर टाढा, साना पेबल्स संग समुद्र तट देखि होटल को बासिन्दा।
चाखलाग्दो कुरा, 2006 मा खोलिएको थियो जो होटल, पहिलो 5-तारे युरोपेली को Adriatic समुद्र को सम्पूर्ण पूर्व तट मा वर्ग थियो।
Becici मोन्टेनेग्रो मा एक प्रमुख पर्यटक गन्तव्य हो, र यो सबै 800 स्थानीय मानिसहरूलाई घर हो भन्ने तथ्यलाई बाबजुद। यो स्थान को मुख्य आकर्षण - लामो बलौटे समुद्र तट। यो 1950 मीटर पुग्छ! र अझै यो स्थान छ एक को सबै भन्दा सुन्दर सारा को दक्षिणी Adriatic। उहाँले पनि 1935 मा पेरिस युरोप को सम्पूर्ण सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तट रूपमा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
खैर, Budva गर्न होटल देखि को बस5मिनेटमा पुग्न सकिन्छ - परिसर ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायात जान्छ को।
होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट5* आफ्नो छुट्टी अतिथि लागि आवश्यक सकिन्छ कि सबै छ। यो बाहिरी पूल, मौसमी, दुई terraces (एक सूर्य), एक आकर्षक बगैचा छ। एक समुद्र तट लागि छुट्टी अतिथि तौलिया प्रस्ताव छन्। गरम - खैर, त्यहाँ अर्को पूल छ।
पनि होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट5मा * एक बिलियर्ड कोठा, टेबल टेनिस, टर्की स्नान, पुस्तकालय, जैकुजी र मालिश सेवाहरू छ। त्यहाँ एक इनडोर स्विमिंग पूल र डार्ट्स छ। यदि मानिसहरू बच्चाहरु संग छुट्टी मा आएको, तिनीहरूले नरमाइलो हुनेछ भनेर चिन्ता गर्न नहुन सक्छ - यो एनिमेसन कर्मचारी दिउँसो र साँझ कान्छो अतिथि लागि कार्य गर्दछ। साथै, होटल छुट्टै छोराछोरीको क्लब छ।
माथिको सबै, को सम्मेलन को Splendid मा बाहेक स्पा रिजोर्ट होटल छ5* एक एसपीए र कल्याण केन्द्र, र एक क्यासिनो, धूपघडी, सना, टेनिस कोर्ट र खेल कोठा छ। सामान्य मा, छुट्टी मा यहाँ रहन जो कोहीले आफ्नो लिङ्कमा मनोरञ्जन पाउन।
को Splendid सम्मेलन स्पा Resort5* त्यहाँ अतिथि नास्ता, भोजन, खाने वा एक खाजा आनन्द उठाउन सक्छौं धेरै दिन लायक प्रतिष्ठानबाट छन्। मुख्य रेस्टुरेन्ट ज्ञात रूपमा ला BUSSOLA। यो 550-600 मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ। मुख्य कोठा बाहेक, त्यहाँ एक छत छ। रेस्टुरेन्ट एक बुफे को सिस्टम मा ग्राहकहरु गर्दछ। र अझै त्यहाँ अक्सर पकाउने एक प्रदर्शन हो।
शानदार रेस्टुरेन्ट, होटल दशौं तल्ला मा स्थित पनि छ। त्यहाँबाट, यो सेरोफेरो को तेजस्वी मनोरम दृश्य प्रदान गर्दछ। कोठा 80 आगंतुकों लागि डिजाइन गरिएको छ।
Gourmets गर्ने प्रेम गर्ने प्रयास स्थानीय भोजन, निश्चित नै मा PROMENADA बीच भोजनालय प्राण। तिनीहरूले मात्र होइन राष्ट्रिय र भू-मध्य व्यवहार गर्छन्। पूर्वी र जापानी व्यञ्जन यो संस्थाले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। र अझै यहाँ आत्माको र मदिरा को एक विशाल चयन प्रदान।
मा साइट छन् धेरै बारहरू। BRACERA पूल पल्ट 80-100 सिटको लागि डिजाइन गरिएको छ। भित्र जाडो बगैचा को आरामदायक वातावरण, र प्रत्यक्ष संगीत सधैं त्यहाँ छ अधिक। अझै पनि त्यहाँ एक लबी पट्टी खुला वरिपरि घडी। धेरै एक कुलीन रक्सी मौज, 50-70 आगंतुकों लागि डिजाइन मन हुनेछ। जब सम्मेलन कोठा पनि एक पल्ट छ। यो 170 सिटको लागि डिजाइन गरिएको छ।
पनि कल्याण-केन्द्रमा स्वस्थ पेय संग एक फिटनेस पट्टी प्रदान गर्दछ। र अन्तमा, पछिल्लो संस्था - सुन्दर समुद्र overlooks जो छत, मा स्थित एक पल्ट छ।
होटल सम्मेलन स्पा को Splendid छ Resort5* सबै सुविधाहरु एक आरामदायक रहन को लागि पाहुनाहरूलाई प्रदान गरिने छ। सम्पूर्ण जटिल निःशुल्क वाइफाइ छ, र थप आगंतुकों एक निजी पार्किंग मा एक ठाउँ पनि छ।
स्वागत घडी वरिपरि खुला - एक व्यक्ति आधारमा चेक-आउट बनाउन। थप प्रस्ताव सेवा र भ्रमण डेस्क द्वारपाल। तपाईं आफ्नो सामान कतै छोड्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि त्यहाँ एक विशेष भण्डारण छ। साइट मा नगद मिसिन, धेरै सुविधाजनक छ जो बाटो, पनि, द्वारा।
परिवार सेवाहरूको श्रेणी साना लागि घर भित्रका एक खेल मैदान को प्रावधान, प्ले क्षेत्र, संगीत, चलचित्र, किताब र अन्य मनोरञ्जन समावेश गर्नुहोस्। किराया यहाँ लागि पनि व्यक्तिगत नानी।
भव्य सम्मेलन स्पा Resort5* समीक्षा विशेष सकारात्मक छन्। यस होटल तपाईं सान्त्वना लागि आवश्यक छ कि सबै कुरा छ किनभने के, अचम्मको छैन। यो एक दैनिक दासी सेवा, लाँड्री, शुष्क सफाई र इस्त्री छ। पनि शू शाइन।
सबै माथि गर्न साथै, होटल व्यवसाय केन्द्र र एक ठूलो सम्मेलन कोठा, अक्सर विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाहरू व्यवस्थित गर्न को लागि भाडामा छ जो छ। तपाईं प्रति वा पठाउन / फ्याक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ एक ठाउँमा पनि छ।
यो Madonna जस्ता सेलिब्रेटीहरू होस्ट कि, यो होटल रोचक छ , बिल क्लिंटन, Anzhelina Dzholi र ब्राड पिट, को समूहले रोलिंग पत्थर, cosmonaut ओलेग Kotov, र धेरै अन्य। यस्तो जानकारी पहिले नै बारेमा उच्च होटल को स्तर कसरी र कसरी त्यहाँ अतिथि छन् कुरा छ।
होटल मा त्यहाँ अरू के छ?
सम्मेलन स्पा को Splendid छ Resort5* (Becici) अझै पनि धेरै अन्य सुविधाहरु छ। अतिथि गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूले एक शटल सेवा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बाट र विमानस्थल दुवै। तर, एक शुल्क लागि। Tivat मा हवाई अड्डा Becici देखि दूरी बारेमा 35 किलोमिटर छ।
सम्पूर्ण होटल गैर-धूम्रपान छ। तर त्यहाँ केही ठाउँहरू जहाँ यो छ दिनुभयो। तैपनि, अतिथि चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूले गैर-धूम्रपान प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
होटल मा त्यहाँ धेरै सुविधाजनक छ जो विभिन्न पसलहरूमा छन् - खरिदका लागि होटल सीमा छोड्ने कुनै आवश्यक छैन। स्मारिका गोठ पनि उपलब्ध छ। थप अतिथि Splendid सम्मेलन स्पा Resort5* (मोन्टेनेग्रो) एक कार भाडामा प्रस्ताव।
मा साथै सबै माथि, अतिथि छन् उपलब्ध परिवार कोठा, अपार्टमेन्ट लागि सुहागरात, लंच पैक तिनीहरूलाई र खाना वितरण गर्न कोठा, सेवा "वेक अप", क्षमता जडान ताप र पनि सुविधाहरु लागि मान्छे संग अशक्तताको। त्यहाँ होटल मा एक hairdresser संग पनि एक सना। एक लिफ्ट गरेर माथिल्ला तलाहरू पहुँच लागि। सामान्य मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट (मोन्टेनेग्रो), फोटो माथि प्रदान गरिन्छ जो साँच्चै यसको क्षेत्र मा हामी उपयोगी हुन सक्छ कि सबै छ।
होटल नाम स्पष्ट जटिल एक स्पा क्षेत्र छ भन्ने तथ्यलाई गर्न alludes। र यो सत्य हो। भव्य एसपीए आगंतुकों हावा धूप न्यानो पानी, आकर्षक उपचार, उत्कृष्ट सेवा र एक अद्वितीय वातावरण भरिएको प्रसन्न। द्वारा बाटो, खुला सैलून मात्र होटल अतिथि, तर पनि लागि साधारण आगंतुकों।
चाखलाग्दो कुरा, धेरै एसपीए-प्रक्रिया प्रयोग मूल बिरुवाहरु। सामान्यतया, तपाईं केहि समय समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ Elemis उत्पादन, कपाल हटाउने सैलून, भाप स्नान, स्पा पेडीक्योर र मैनीक्योर, एक निजी सना, Hromaroma (समग्र उपचार, color- र मार्गदर्शन मालिश संग संयुक्त एरोमाथेरापी आधारित), शरीर wraps र थप एक सौन्दर्य दोकान छ।
स्पा क्षेत्र पनि छ एक मध्यम-तापमान, फिनिस र जैव सना, softwood, एक इनडोर पूल, परम्परागत पत्थर सना। तपाईंले अझै पनि हिउँ र अनुभव वर्षा, बरफ फोहरा वा बाफ स्नान भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै सबै, यो ठाउँमा रहन, तपाईं निश्चित एसपीए गर्न समय लिनुपर्छ। एक अविस्मरणीय अनुभव रहनेछ।
पहिले यो होटल एक क्यासिनो छ उल्लेख गरिएको थियो। र यो छ - अतिथि को मनपर्ने मनोरञ्जन को एक। क्यासिनो होटल दशौं तल्ला मा स्थित छ। त्यहाँ एक स्लट मिसिन, अमेरिकी रूले, साथै क्यारिबियन, रूसी र टेक्सास होल्डम छ। ब्लेक को प्रशंसक दूर र यो खेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ विद्युतीय रूले छ।
यो क्यासिनो, मा अतिरिक्त मनोरञ्जन, त्यहाँ छ रेस्टुरा निःशुल्क पेय। र त खेल लिए ठाउँमा रमाइलो, अनुभवी स्टाफ क्यासिनो छ सधैं तयार गर्न प्रदान प्राविधिक सहयोग।
सोही, यो5तारे होटल पनि एक हैलीपैड छ। यो छत मा स्थित छ। अतिथिहरूको, तिनीहरूले चाहनुहुन्छ भने, भ्रमण हेलिकप्टर उडान वा विशिष्ट गन्तव्यमा प्रबन्ध हुन सक्छ।
यो5तारे होटल आफ्नो क्षेत्रमा साँचो विशेषज्ञहरु छ। सबैसँग, कम्तिमा एक पटक होटल मा विश्राम यसलाई कसरी महत्त्वपूर्ण थाह छ। पहिलो, मान्छे यस ठाउँमा काम को प्रशिक्षण को खुसी स्तर। तिनीहरूले बोल्ने आठ विभिन्न भाषामा! जो बीच तर आनन्दित हुन सक्छौं जो रूसी छन्। कर्मचारी पनि सर्बियन, स्लोवेनियन, क्रोएसियाली, इटालियन, जर्मन, अंग्रेजी र फ्रान्सेली मालिक हो।
होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट समीक्षा गिर यसलाई स्पष्ट यस होटल मा Housekeeping अन्तस्करणले मा गरिन्छ कि बनाउन। केही पनि कर्मचारी पनि अक्सर घर सफा भन्छन्। र तौलिया लगभग दुई पटक एक दिन परिवर्तन छन्। र हरेक दिन खाट ताजा कुरकुरा सनी घुम्टो। स्वच्छता र प्रसाधन पनि प्रतिस्थापित नियमित। सफाई पछि अतिथि आफ्नो तकियों स्वादिष्ट चकलेट, पनि खुसी पार्न असफल सक्छ जो मा देख्यौं।
सामान्य मा, अतिथि तिर मनोवृत्ति प्रदान गरिन्छ। अर्को निश्चित प्लस - र यो छ।
र अब तपाईं जो मानिसहरूले यो होटल मा आराम गर्न चाहने रोक्न सक्नुहुन्छ कोठा, बताउन पर्छ। अधिक सिर्फ एक होटल "मानक" अपार्टमेन्ट। तर, यो छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको - अन्तर्गत यी संख्या सर्तहरू थप "सुइट्स" जो केही मिश्रको वा टर्की परिसर जस्तै हो,5तारे होटल।
42 वर्ग को एक क्षेत्र। एम। भित्र, एक सोफा बेड र एक विशाल 2-बेडरूम राजा आकार बेड छ। यी elegantly सजाया अपार्टमेन्ट पनि एक बालकनी उपग्रह र केबल वातानुकूलन, सुरक्षित, दराज, बस्ने क्षेत्र र सुरक्षित साथ, प्लाज्मा टिभी छन्। माथिको साथै, त्यहाँ अझै पनि एक मिनी-पट्टी, hairdryer, टेलिफोन, र मानार्थ चप्पल, टवेल र स्नान जस्तै यस्तो राम्रो थपिएको छ। यो कोठा मा रहन को लागि, दुई को लागि 120 हजार rubles तिर्न मूल्य समावेश नाश्ता आवश्यक हुनेछ।
त्यहाँ थप उच्च कोठा छन्। एउटै क्षेत्र र अवस्था, तर अवस्था फरक छन्। पहिले, को समुद्र को दृश्य। दोस्रो, लम्बी ओछ्यानमा (दुई मिटर भन्दा बढि)। तेस्रो, पाहुनाहरूको उपलब्ध टिभी, Carpeted तल्ला, Dressing कक्ष, लुगा भ्कुन्डाउने साधन र ड्रायर छन्। यी अपार्टमेन्ट इच्छा लागत पहिले नै 130 000।
सोही, शहर कर देय अलग छ। उहाँले प्रति व्यक्ति डेढ प्रति रात यूरो छ।
होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट (मोन्टेनेग्रो) मा कोठा को अर्को वर्ग - यो छ। त्यहाँ दुई ठूलो एकल बेड रूपमा एउटा विकल्प र एक विशाल, राजा-आकार आकार एक हो।
कोठा एक शानदार शैली सजाया छ। अतिथिहरूको, यो संग, विशाल, शानदार समुद्र दृश्य संग सुसज्जित बालकनी छन्। बाँकी - अवस्थाको पनि पहिले उल्लेख संख्या मा जस्तै हो। मूल्य, को पाठ्यक्रम छ फरक। यी अपार्टमेन्ट7रात दुई (नास्ता सहित) 140 000 rubles खर्च हुनेछ।
अपार्टमेन्ट "जुनियर" श्रेणी 54 वर्ग मीटर को एक क्षेत्र घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एम। यो सहज कोठा एक निजी बालकनी, प्लाज्मा टिभी उपग्रह, केबल संग विशेषताहरु र टिभीमा तिर्न साथै वातानुकूलन र मिनीबार रूपमा।
भित्र, खैर, लम्बी 2-ओछ्यानमा सेट गरिएको छ। अवस्थाको बाँकी भएको पहिले उल्लेख अपार्टमेन्ट मा जस्तै हो। यो संख्या7रात (नाश्ता) को लागि दुई मान्छे को लागि बारेमा 280 000 rubles खर्च हुनेछ।
र अन्तमा, लक्जरी अपार्टमेन्ट बारेमा केही शब्द। आफ्नो क्षेत्र 84 वर्ग छ। एम। लक्जरी सुइट्स गर्नुभएको स्पा स्नान र एक विशाल बालकनी सूर्य loungers र समुद्र दृश्य। अझै पनि एक रेडियो, ल्यापटप सुरक्षित छ भित्र, माथि दिइएका सुविधा, जीवित कोठा, काठ फर्श र काम डेस्क बाहेक। सुइट लागि दुई इच्छा लागत 330 000 rubles को लागि7दिन।
अब, केही शब्दहरू जटिल होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट बारेमा टिप्पणी बाँकी छ के भने गर्नुपर्छ। समीक्षा कि आश्चर्य छैन, धेरै सकारात्मक छन्। धेरै एक समुद्र तट छुट्टी लागि यहाँ आउनुहोस्। lounges र खत्म तौलिया देखि - त्यसैले, यो कर्मचारी लागि आवश्यक सबै प्रदान गर्दछ। र सबै समय सधैं छ। तर, तपाईं पूल 19:00 मा बन्द भएकोले 7-8 बजे गर्न तौलिया लिनु आवश्यक छ। धेरै भन्न एक माइनस - होटल आफ्नै खाना वा पानी ल्याउन सक्दैन। तर धेरै केहि मान्छे रोक्दछ यो निर्णय द्वारा समीक्षा, विशेष गरी जब यो आउँछ गर्न रूसी पर्यटक। मा हैंडबैग कसैले देखिन्छ, त्यसैले गर्न लैजाने मा आफ्नो कोठा भनेर इच्छा फिट तिनीहरूलाई छैन गाह्रो।
तर प्लस अझ थप। उदाहरणका लागि, Budva यात्रा गर्न तपाईं ठाँउहरु हेर्न र मोन्टेनेग्रो को रोमाञ्चक जीवन अनुभव गर्न, चाहनुहुन्छ भने छ। 25 यूरो यदि एक्लै आदेश ट्याक्सी लायक। र स्वागत मा - मात्र5€!
थप ध्यान, धेरै राम्रो पाइपलाइन भन्छन्। कोठा सजिलै कुनै पनि अनुहारको रुप रंग को एक मानिस फिट जो धेरै सहज बाथरूम, छन्। शवर धेरै ठूलो काम बिना अवरोध। सामान्य मा, सबै कुरा 5-तारे स्तर पारस्परिक रहेको छ।
त्यसैले, तपाईं मोन्टेनेग्रो मा अविस्मरणीय बिदा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यस होटल जाने गर्नुपर्छ। कुनै पनि अवस्थामा, एक पटक यहाँ भ्रमण गरेका गर्ने पर्यटकहरूको धेरै फिर्ता गर्ने निर्णय। यो साँच्चै राम्रो मोन्टेनिग्रिन होटल को एक हो। तुलना गर्न केही गर्नेहरूलाई मान्छे, यो वास्तवमा सत्यता पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ।
Dona सा मारिया2* (भारत, गोवा, Cavelossim): होटल, सेवा, समीक्षा को विवरण
Xeno होटल Alpina4* (टर्की / Alanya)। फोटो, पर्यटकहरु समीक्षा - Alanya होटल
कोठा मा जैकुजी संग मास्को होटल: सबै भन्दा राम्रो विकल्प को एक समीक्षा
लोटस खाडी Resort4* मिश्र, Safaga। समीक्षा
होटल Medplaya होटल क्यालिप्सो3* (स्पेन, कोस्टा Dorada): सिंहावलोकन, फोटो र समीक्षा
आर्सेनिक एसिड: रासायनिक संरचना सूत्र। अत्यधिक खतरनाक पदार्थ
अनुहारमा स्केलिङ कसरी हटाउने? छाला हेरचाहको लागि सुझाव